I-Albarracín, idolobha elihle kakhulu eSpain | Izindaba Zokuhamba
Isifundazwe saseTeruel singesinye salezo zindawo ezakha iSpain. Indawo engaziwa kwezokuvakasha nokho enamagugu eqiniso okufanele aziwe. Lapha sithola esinye sezibonelo ezinhle kakhulu zobuciko beMudejar emhlabeni, obutholile ukuthi buhlonishwe yi-UNESCO njengeNdawo Yamagugu Omhlaba. Kubuye kube yisibalo sama-dinosaurs ngoba esifundazweni izinhlobo eziyishumi zalezi zilwane ezihuquzelayo zangaphambilini zitholakale eminyakeni edlule futhi sengathi lokho bekunganele, eTeruel kunalokho okubizwa ngeTuscany yaseSpain, ikakhulukazi esifundeni saseMatarraña.
Omunye wamagugu alo agcinwe kahle yi-Albarracín, idolobha lasendulo eliseZintabeni Zomhlaba Wonke elibhekwa njengedolobha elihle kunawo wonke eSpain. Ufuna ukwazi ukuthi kungani? Qhubeka ufunde!
1 Ukuphi i-Albarracín?
2 Ungafika kanjani e-Albarracín?
3 Umsuka we-Albarracín
4 Yini ongayibona e-Albarracín?
5 I-Alcazar ne-Andador tower
6 Imigwaqo yase-Albarracín
7 ICathhedral yase-El Salvador
8 Isigodlo se-Episcopal
9 ISonto LaseSanta Maria
10 Umzila oya Ezindongeni zase-Albarracín
I-Albarracín itholakala esiqhingini sezwe nasenhlonhlweni eyakha uMfula iGuadalaviar. Izungezwe udaka olujulile olusebenza njengomsele wamanzi wokuzivikela, ogcwaliswa yibhande elikhulu lezindonga eliphelela enqabeni yase-Andador. Indawo okuyo, endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1182, nesimo sezulu sayo kunikela ngemisebenzi eminingi egxile ikakhulu emisebenzini yangaphandle efana nokuhamba ngebhayisikili entabeni noma ukuhamba izintaba. Ngaphezu kwalokho, endaweni ezungezile kunenani elikhulu lemidwebo yomhume emizuzwini embalwa nje yomgwaqo omkhulu.
Ungafika kanjani e-Albarracín?
Leli dolobha lase-Aragonese lisendaweni engamakhilomitha angama-35 ukusuka eTeruel, isigamu nje sehora ukusuka enhlokodolobha. Yize kukhona ithuba lokuhamba ngebhasi, imoto iyindlela engcono kakhulu yokuhlola idolobha nezindawo ezilizungezile ngokukhululeka.
Kusukela lapho ivela khona i-Albarracín ibonakaliswe ngendawo yayo, amandla ayo njengendawo yokuzivikela enqumayo. Yazalwa njengedolobhana elincane elizungeze isonto langaphambi kwamaRoma laseSanta María. Cishe ngonyaka we-965 AD indawo yokuqala yokuzivikela yathuthukiswa ngesikhathi sokuhlasela kwamaSulumane, okubandakanya isonto laseSanta María kanye ne-Alcázar.
Yini ongayibona e-Albarracín?
I-Alcazar ne-Andador tower
Njengamanje, inqaba, esemaphethelweni edolobha ebheke uMfula iGuadalaviar, kusele izinsalela zezindlu ezingaphansi kodonga nemibhoshongo. Esitezi esiphezulu kwakukhona indawo yokuhlala enkulu ezungeze iphathio, lapho kukhona khona umthombo omkhulu.
Umbhoshongo i-Andador, ekuqaleni owawungumbhoshongo i-albarrana, ubuye ube ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi wafakwa endaweni ebiyelwe ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX, lapho idolobha laba inhlokodolobha yesizwe esasiphethwe yiBanu Razin Imvelaphi yamaBerber. I-White Tower eseduze neSonto laseSanta María isukela ngekhulu le-XNUMX. Ngayo uhlelo lokuzivikela lomuzi lwaqedwa.
Ukubaluleka kwayo kokuzivikela kwalahleka ngekhulu le-XNUMX, lapho uFelipe V eqeda ama-fueros ase-Aragon futhi wayala ukuthi kudilizwe le nqaba, yize kungezona izindonga nemibhoshongo eyinhloko, njenge-Andador noma iDoña Blanca tower.
Emashumini eminyaka adlule ekhulu lama-2000, imisebenzi yokuvuselela yenziwa ukubuyisa izindonga zasentshonalanga nezaseningizimu kwathi ngonyaka ka-XNUMX lesi sakhiwo samenyezelwa njengezimpahla zenzalo yamasiko.
Kodwa ubuhle be-Albarracín bungaphezu kwakho konke ekuhlelweni kwemigwaqo yayo evumelaniswe nesimo sendawo esinzima, ngezitebhisi neziphaseji. Wonke amakhona, yonke indlu iyinto ebabazekayo ngeminyango yayo nangoknocker, amawindi ayo amancane anamakhethini entambo, kuvulandi bawo oqhubekayo ngensimbi eqoshiwe nokhuni oluqoshiwe ... Isikhumbuzo esiyinhloko sase-Albarracín yidolobha uqobo lwalo, nakho konke ukuthandwa kwalo ukunambitheka nokuhlonipheka, okukhombisa umlando wawo nomsebenzi omuhle wabantu bawo.
Kodwa-ke, phakathi kwezithabathaba ezibukekayo nokwakhiwa okuthandwayo esingakuqokomisa: indlu yaseJulianeta, indlu esemgwaqeni u-Azagra, isikwele soMphakathi kanye neMeya encane yasePlaza evusa inkanuko.
Manje, ukubalulwa okuhle okukhethekile kufanele izakhiwo ezifana neSonto LaseSanta Maria, iCathedral, Isigodlo se-Episcopal.
ICathhedral yase-El Salvador
Isithombe | ISanta María de Albarracín Foundation
ICathedral yase-El Salvador yakhiwa phakathi kuka-1572 no-1600, ethempelini langaphambilini ngesitayela se-Romanesque ne-Mudejar. Sibhekene nokwakhiwa kwe-Renaissance nge-nave eyodwa embozwe ngama-polychrome ribbed vaults wesiko laseGothic esedlule. Inamasonto phakathi kwezinqe kanye nekhwaya ezansi.
Isekelwa ngama-pilasters ama-baroque nama-cornices, okuyingxenye yokuvuselelwa okwenziwe ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX kuleli thempeli elikhulu, kuguqula ukubukeka kwalo kwe-Gothic kwaba yi-Baroque. Ngekhulu le-XNUMX, ingaphakathi lalipendwe ngombala ompunga nangokuvuselelwa kabusha kwethempeli ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, lo mdwebo ususiwe ukubuyisela izindonga kumbala wokuqala wekhulu le-XNUMX.
ICathedral yase-El Salvador inendawo lapho ungangena khona e-Episcopal Palace eseduze kwayo. Namuhla leli bhilidi ligcina iDiocese Museum lapho kuhlala khona iqoqo elibalulekile lamatheyiphu nabakhandi begolide.
IDiocesan Museum yase-Albarracín isesitezi esihle e-Episcopal Palace, isakhiwo sekhulu le-XNUMX. Kungavakashelwa ngaphakathi kohambo oluhlelwe yiSanta María de Albarracín Foundation, ebizwa Izikhala ze-Albarracín namagugu, ngubani ophethe umnyuziyamu.
Ngaphakathi kweqoqo lalo elikhulu singagqamisa izingcezu zensimbi yegolide ezisuka emcebweni wesonto lombhishobhi kanye nasemaphepheni aseFlemish enziwe eworkshop yaseGeubels eBrussels, emele indaba kaGideon.
Kodwa-ke, ungavakashela namakamelo esigodlo njengegumbi laseMayordomia, amakamelo asemthethweni ombhishobhi namakamelo akhe azimele lapho kufanele kuvezwe khona ihhovisi, elihlotshiswe ngemidwebo yodonga yekhulu le-XNUMX. Amanye amakamelo akhombisa izinsimbi zomculo obekuhambisana nazo imigubho ye-cathedral, izincwadi zamakhwaya, amatafula amaGothic nefenisha ethile.
ISonto LaseSanta Maria
Itholakala emaphethelweni edolobha, kulokho okwake kwaba yingqikithi yabantu. Ithempeli lasekuqaleni kwakuyisonto lamaVisigoth elaliyingxenye yohlelo lokuvikela lomuzi, okungukuthi, lwezindonga, kodwa umlilo owenzeka ngekhulu le-XNUMX wadala umonakalo omkhulu, ngakho-ke isonto lamanje lekhulu le-XNUMX elalinomkhumbi owodwa ombozwe ngendlwana enezimbambo lafika esikhundleni salo. Ngekhulu le-XNUMX isonto laseSanta María kwakuyisonto lesigodlo saseDominican, esesinyamalele manje.
Ingaphandle layo lisesitayeleni seMudejar, esingathokozelwa ngaphakathi kwalo lapho umhlobiso omningi wezinsika eziphakeme ezinikezwe isonto nomphakathi wase-Albarracín. Inezinsimbi eziningi ze-altare ezibaluleke kakhulu, yize okubaluleke kakhulu yilelo le-altare elikhulu elisukela ngekhulu le-XNUMX.
Umzila oya Ezindongeni zase-Albarracín
Ukuvakashela e-Albarracín akupheleli ngaphandle kokwazi izindonga ezizungezile futhi eziyingxenye yezakhiwo zikamasipala ezinomlando omkhulu. Kunezindlela ezintathu zokufika lapho: ngasemgwaqweni uChorro, ngokukhuphuka uye eTorres usuka esontweni laseSantiago nangengosi yaseMolina. Ngesikhathi sohambo kufanele ukhuphuke imithambeka ethile emihle, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ugqoke izicathulo ezinethezekile namanzi athile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » I-Albarracín, idolobha elihle kunawo wonke eSpain
ISan Vicente de la Barquera